Madaxweynaha Jamhuuriyada Somalia oo Maanta gudoominaya shirka Brussles | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweynaha Jamhuuriyada Somalia oo Maanta gudoominaya shirka Brussles
Madaxweynaha Jamhuuriyada Somalia oo Maanta gudoominaya shirka Brussles
Waxaa Maalintii labaad galay shirka iskaashiga Somalia iyo beesha caalamka kaasoo ay ka qeybgalayaan madaxda dowlda federaalka Somalia xubno ka socda Maamul goboleedyada, masuuliyiinta Bulshada rayidka iyo wakiilo ka socda beesha.Caalamka.
Shirka oo shalay furmay ayaa waxaa looga hadlayaa Arimaha siyaasada,Amniga, Horumarinta dhaqaalaha,iyo dib mideynta Canshuuraha dalka.
Madaxweynaha Jamhuuriyada Somalia Mudane Maxamed Cabdullaahi farmaajo ayaa maanta shirka gudoominaya, iyadoo lagoo hadli doonno qodobo ay kamidyihiin dib u-habeynta ciidamada, la daagalanka kooxaha argagaxisada, Doorashooyinka, Hannaanka mideynta Canshuuraha dalka iyo qodobo kale.
Masuuliyiinta Dawlada Federaalka ee Somalia ayaa shirka geeyey document ku saabsan waxyaabihi u qabsoomay intii ay dowlada jirtay iyo caqabadaha ka heysta waxyaabaha u dhimman.
Shirkan waxaa barbar socda shirar iyo kulamo gaar gaar ah kuwaasoo ay shalay yeesheen masuuliyiinta Somalia iyo wakiilada beesha caalamka.
Masuuliyiinta Dawlada ayaa doonaysa in si toos ah loogusoo wareejiyo dhaqaalaha beesha caalamka ay ugu deeqdo Somalia, si loogu maareeyo waxyaabihi loogu dhaqaalahaas in lagu qabto.
Tan iyo intii la doortay dawlada federaalka ee hadda jirta waxay horumar fiican ka gaartay arimaha Amniga, Habeynta dhaqaalaha, la dagaalanka musuqmaasuqa, iyo qodobo kale kuwaasoo beesha caalamka ay ku ammaantay.
Previous articleShirkada Apple Stories oo laga hirgaliyay Muqdisho
Next articleEritrea oo dib u furatay Safaaraddeedii ay ku lahayd Addis ababa